Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara amara dị ka "Serbian Falcao". Nwa akwukwo anyi na Jojic akwukwo n'akwukwo na ihe omuma nke oma bu ihe omuma nke ihe omuma ihe site na nwata rue oge.
Luka Jovic Child Story- Site na nwata ruo n'oge
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya n'ihu ihe mgbaru ọsọ, nke mere ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-achọsi ike ịgba ọsọ ụkwụ na football na European. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole ndị football football na-atụle akwụkwọ akụkọ João John Jovic bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Luka Jovic na 23 nke ụbọchị nke ọnwa 1997 na nne ya, Svetlana Jovic na nna, Milan Jovic (onye bụbu ọkpọ ụkwụ) n'obodo Bijeljina, Bosnia na Herzegovina.
Jovic tolitere n'ebe obibi ya dara ogbenye na ndị mụrụ ya na nwanne ya nwanyị bi n'ime ime obodo Batar, nke bụ 14 kilomita n'ebe ndịda Bijeljina. Tupu a mụọ ya, nne na nna ya na ndị òtù ezinụlọ ya nwere nsogbu na mkpasu iwe nke 1990 nke mbụ mere na Bijeljina, Bosnia na Herzegovina.
Luke Jović Ezinụlọ na ndị obodo ibe ha nwere mmekpa ahụ n'oge mbụ 1990 si.
Ihe a na - emeghị nke Bosnia na Herzegovina gbochiri ndị na - agba ụkwụ na - enwe ezigbo ọganihu na papa Jo Jojic nọ na - anata ya. N'ụzọ dị mwute, Milan Jovic nwere ohere iji soro Partizan Belgrade na-egwu egwuregwu amateur na-enye obere ego maka ezinụlọ ya.
Na-etolite, ọ dịghị ihe egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu, ọ bụ nanị football nke Jovic gbara ụkwụ na papa ya na-egwuri egwu. Luka Jovic papa Milan na oge ụfọdụ ọ na-eji nwayọọ nwayọọ kpebie ịnọgide na-ahụ nrọ ya site n'aka nwa ya nwoke.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'ịbụ onye nwere nna na-ahụ n'anya nke football na nne na-akwado, ọ bụ naanị maka ịhụnanya nke egwuregwu mara mma ka a ga-azụlite na nwata bụ Luka Jovic bụ onye a na-ahụkarị na ya na papa ya. Milan gbara nwa ya ume ilekwasị anya na nkuzi nke football na olileanya nke inyere ya aka ịnọgide na-ahụ nrọ ya na-adịghị ahụ anya.
Luke Jovic- Ụlọ Ọmụmụ na Ụlọ Ọrụ. Ebe E Si Nweta IG
E mere Luka Jovic ka a mara egwuregwu ahụ n'oge 5 dị na 2002, afọ ọchịchọ ya maka ịgba bọl hụrụ ya ka ọ na-eme ka agụmakwụkwọ ya ghara inwe ohere maka ịmalite ọrụ.
Na 2004, na-enwe obi ụtọ Luka mgbe ọ nwesịrị ule na-enweta ohere ịtọ ntọala ya na ọkwa Obere Maxi. Nke a bụ mmepe mmepe na Belgrade maka ụmụaka dị n'etiti 4 na 12. Tupu ya agawa egwuregwu mbụ ya, Jovic papa kụziiri ya otu esi arụ ọrụ na ụkwụ abụọ. Ọ bụ ezie na Jovic kwadoro ụkwụ aka nri ya mbụ, Otú ọ dị, ọ mụtara ịkụ bọl ahụ dị ka obi ike na aka ekpe ya.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Egwuregwu Job Jovic pụtara ìhè site n'egwuregwu mbụ ya n'egwuregwu ahụ. Ị maara?… O weere ihe ọkpụkpọ na egwuregwu mbụ ya, ihe na-ahụ ndị nduzi ụlọ ọrụ na-ekwenye na ha ga-enye papa ya ego ha ga-agba nwa ya ume ka o nwee ihe mgbaru ọsọ ọzọ.
A na-enye Milan Jovic € 50 maka ihe mgbaru ọsọ ọ bụla ọ gbatara. A na-akwụkwa ya ụgwọ maka njem nleta 2000 na-eweta na-eweta Luka site na obodo nta ha na Belgrade. E mere ihe ndia nile n'ihi na ewere nwa ya nwoke di egwu.
N'otu n'ime egwuregwu Jovic ebe ọ na-agbachitere ihe mgbaru ọsọ, Toma Milićević, onye na-akpọ Red Star nke na-akpọ ya ka o kpee ikpe na Red Star Belgrade, nwetara ya. Luka Jovic gafere n'ụgbọ na-efe efe, o wee banye n'ụgbọ ahụ. N'okpuru ebe a bụ foto ya na agba osisi.
Luke Jovic Early Life Care Life
Tupu ha abanye na klọb ahụ, nna Jovic kpọọrọ ya na Partizan ka ọ zụọ ya, otu ụlọ ọ na-egwuri egwu maka ịbanye Jović. Partizan nyere Milan 200 euro kwa ọnwa maka nwa ya nwoke bụ Luka Jovic iji soro ha rụọ ọrụ, ma ọ gbanwere obi ya ma kwusi ike na nwa ya ga-anọ Red Star.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Akpanwu akwukwo akuko
Jović nọgidere na-enwu n'òtù ndị ntorobịa, e weere ya dị ka ihe ijuanya maka ọdịnihu. N'ịbụ onye na-etolite n'ime afọ iri na ụma, ọ malitere ịkwatu Ibrahimovic na Radamel Falcao. Ị maara?… Jovic na-ede aha arụsị ya n'egbughị oge n'azụ ya na profaịlụ Facebook ya.
Na 28 May 2014, mgbe ọ dị afọ 16, Jovic mere mmalite ọkachamara ya na Red Star. N'ịbụ onye na-amalite ọrụ ọrụ ya, o mebiri ndekọ Dejan Stanković ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ kasị nta na egwuregwu asọmpi na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ụzọ a na-akpọ Luka Jovic. Ebe E Si Nweta RedStar na IG
Nke a mara mma hụrụ ụlọ ọgbakọ niile na Europe na-achọ maka mbinye aka ya. Otu mkpebi dị na February nke 2016 mgbe Jovic kpebiri ịkwaga ebe ịta nri ọhụrụ. The 18 afọ football kpakpando mere mbụ ya na-akpali ọrụ ya mgbe ọ sonyeere ndị Portugal Portuguese ukwu Benfica.
Ọ bụ ezie na Jovic dị na Benfica, e nwere akụkọ site na Football Leaks nke gosipụtara mmasị na Jović nkwekọrịta, otu akụkọ nke mebiri kpakpando ahụ. N'ikpeazụ, Jovic malitere ịmalite inwe ọganihu na nke a kpatara ọtụtụ nhụjuanya maka ndị na-eto eto.
Ụzọ a na-akpọ Luka Jovic. Ebe E Si Nweta IG
"Enwere m nsogbu uche, enwere m ụlọ obibi, emekwara m nnukwu ihe ọjọọ."
Jovic kwuru na Ihe na-agbasa akụkọ. Onye Serbian na-aga site n'oge mbụ na-edekọ ihe nkiri na Red Star hụrụ onwe ya ka ọ na-akwụda ya ka ọ bụrụ Benfica B na Segunda Liga.
Mgbe ọ fọrọ nke nta ka echefughị ​​ya na Europe, otu ụlọ na-eguzo n'akụkụ ya ka ha nọgide na-arịọ maka Serbia. Ọ bụ Eintracht Frankfurt Germany nke mesịrị zọpụta Jović site na nrọ nke Benfica. Ụlọ ọrụ ahụ nakweere ya na mbinye ego ma emesịa mee nkwekọrịta ya ruo mgbe ebighị ebi.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Na-ewu ewu Akụkọ
Mgbe ihe omimi nke abuo na Germany, uzo na ngwa ngwa biara buru uzo ya wee buru ihe di mkpa nke ndi otu mbu nke Eintracht Frankfurt. A maara Jovic dị ka onye na-eti bọmbụ na ụkwụ abụọ. O wee bụrụ onye a gọziri agọzi site n'echiche nke oge, nke na-eweta ihe mgbaru ọsọ ndị mara mma na ememe nnukwu.
Luke Jović Nwee Okpomiri Aka Akụkọ. Ebe E Si Nweta Playing90
Jovic diri mmeri a na-ebuli elu nke mere ka ọ bụrụ nke kachasị mma na nke kachasị na Europe. Tonye Serbian na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ya aghọwo nnukwu ma dị ike ma ghara ịdị njikere iburu ụkwụ ya na pedal gas. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Na Jovic na-ebili ka ama ama, o doro anya na ndị Fans ga-ajụ ajụjụ ahụ ọkụ. Ònye bụ enyi nwanyị Joño, nwunye ma ọ bụ dị ka ụfọdụ ga-akpọ ya, WAG?
Luka Jovic nọ na mmekọrịta ya na Andjela Manitasevic kemgbe ọ bụ nwata na Red Star Belgrade. N'okpuru ebe a bụ foto nke ịhụnanya ụmụ nnụnụ n'oge ha na-akpa mmekọrịta afọ.
Luke Jovic Mmekọrịta Ndụ - Eziokwu Na-ezighị Ezi
Ikpe ikpe site na foto ha n'elu na nke dị n'okpuru, o doro anya na Andjela Manitasevic nwere ike ịbụ okenye karịa nwoke ya. Onye chọrọ ịma!! mgbe niile, ezi ịhụnanya dị mkpa ma afọ dị ole na ole.
A maara Luka Jovic maka igosi na ya na enyi ya nwanyị Andjela Manitasevic na-agbasa na mgbasa ozi. O doro anya na ha abụọ nwere mmekọrịta siri ike nke e wuru na ọbụbụenyi.
Andjela Manitasevic na Luka Jovic nwere mmasị inwe oge dị mma
Eziokwu ahụ bụ na ma ndị hụrụ ya n'anya na-enwe mmekọrịta oge na-adịghị anya doro anya na agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ usoro iwu ọzọ maka ha.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata ihe gbasara ndụ Jochok ga - enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Malite na Jovic enwere uche. O nwere ezigbo nchekwube, nwee obi ike, ma nwee mmasị mgbanwe. Jovic nwere ike ịgbanwe echiche ya dị ka ihe dị iche iche, ọ ga-eme ihe ọbụla iji nweta ọrụ ya na ihe mgbaru ọsọ ya.
Egwuregwu bọl, dị ka anyị na LifeBogger hụrụ anụ ụlọ anyị na Luka Jovic n'onwe ya abụghị ihe ọzọ. Ọbụna ị nwere okwu na ebe ahụ ọ dịghị eguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke oge a, ọ gaghị echebara mmekọrịta dị n'etiti Jovic, nkịta na enwe ya.
Luke Jovic Personal Life Eziokwu
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- LifeStyle Life
Jovic bara uru na £ 49.50 m nke pụtara n'ụzọ nkịtị na ọ bụ nde mmadụ nde mmadụ. Otú ọ dị, na-ekpe ikpe site na akaụntụ mgbasaozi ya, ọ bụ ụdị ndị na-agba ọsọ na-etinye ego ya na-enwe njem dị oké ọnụ ahịa ma n'ala na mmiri.
Luke Jovic Web
Otú ọ dị, Jovic adịghị ahụ anya site na njedebe nke ụgbọala mara mma, booze, swagger na ụmụ agbọghọ. Ọ maara ihe banyere ijikwa ego ya n'akụkụ ụfọdụ nke ndụ.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Na-ekwu banyere ezinụlọ João Jovic, ha si na Yugoslavia pụta, bụ mgbe Agha Ụwa nke Abụọ mechara ghọọ mba isii nke otu n'ime ha bụ Bosnia na Herzegovina. Nna John Jovic bụ Milan, onye a mụrụ na 1975 bụ ogwe aka ochie nke Partizan football nke dị na Serbia.
Luke Jovic's papa- Milan Jović. Nostalgija
N'adịghị ka nwa ya nwoke bụ Luka, Milan enwetaghị ọtụtụ ọrụ dị mma n'ọrụ ya. Ọ na-egwuri naanị 82 ka ọ na-emeri Russian Premier League n'afọ 2000 tupu ya ekpuchi akpụkpọ ụkwụ ya na 2003.
Milan Jovic na nwunye ya bụ Svetlana na-achọ ibi ndụ ndụ n'etiti ndị nọ na Serbia n'agbanyeghị akụnụba nke nwa ya n'aka football. Ozi a bịara mgbe German BILD akwukwo otu gara aga ichoputa ihe gbasara ebe obibi Luka Jovics na Serbia. Ha chọpụtara nna ya na ndị ezinụlọ ha.
Nna John Jovic -Papa Milan. Ebe E Si Nweta picture
Mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ na onye njide, Milan Jovic kpughere na ọ na-aghọgbu nwunye ya, Svetlana maka ọrụ nke nwa ya ma nweta onwe ya ụgwọ. Taa, ma Jovic papa, mama, nwanne na ndị ikwu ya enwetawo uru nke ihe ize ndụ nke onyeisi ezinụlọ ahụ.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Eziokwu efu
Ị maara?… November 2015 bụ ọnwa na-agba mbọ maka ezinụlọ Luka Jovic. Nke a bụ oge ezinụlọ tara ahụhụ site n'aka otu onye na-ebu agha site na Loznica (obodo dị na Serbia) bụ onye tụrụ egwu na Luka Jovic na ọ bụrụ na ọ gaghị akwụ ya ụgwọ, ọ "ga-mebie ụkwụ ya".
Luke Jovic Eziokwu Eziokwu. Ebe E Si Nweta YouTube na IG.
E jidere onye ahụ na-enyo enyo mgbe nne na nna Jovic kọọrọ ndị uweojii okwu ahụ gbasara ndị uweojii na-ewepụta oge ha iji nyochaa ma mee ka onye ahụ na-eme ihe ọjọọ dega akwụkwọ.
Ị maara?… Luka Jovic nwere ihe mberede na ụgbọala Mercedes na obodo Patkovača, nke dị nso na ebe a mụrụ ya na Bijeljina na Bosnia na Herzegovina. N'ime ihe mberede ahụ, Luka Jović merụrụ ahụ mana ozugbo anapụtara ya mgbe ọ gbasịrị ọsọ ọsọ.
Luka Jovic nwere ihe mberede. Ebe E Si Nweta Fenix.
Ị maara?… Jovic nwere egbu egbu n'elu obi ya, nke na-eche ka ndị na-echegbu onwe ya ihe ọ pụtara.
Akwụkwọ akụkọ Luka Jovic
Ọfọn, ọ dị ka onyinyo Jizọs nke gosipụtara okpukpe okpukpe Ọtọdọks nke Ndị Kraịst nke jupụtara na Serbia. Jovic buru ụzọ kpughee egbu a n'oge 2018 FIFA World Cup na Russia.
Ị maara?… Jovic bụ onye kasị nta mgbe ọ bụla ọkpụkpọ egwu ise ise na otu Bundesliga egwuregwu. Ihe ndekọ nke Robert Lewandoski dere na mbụ. N'okpuru ebe a bụ vidio nke ndekọ ya - imebi ihe ise n'ime otu egwuregwu.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu- Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Jovic na-agụ anyị na Akụkọ Jogic na-abụghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.